Magaalo weyn ayaa laga dhisayaa dusha sare ee Erciyes. Kayseri diyaar ma u tahay tan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriMagaalo weyn waxay ku taalaa dhinaca sare ee Erciyes, Kayseri ayaa diyaar u ah tan
Magaalo weyn waxay ku taalaa dhinaca sare ee Erciyes, Kayseri ayaa diyaar u ah tan
17 / 03 / 2014 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, GUUD, TELPHER
Erciyes 'oo ku yaal magaala weyn ayaa la dhisay, Kayseri ayaa diyaar u ah tan: "Maalinta ugu qabow ee sanadka aad timid Kayseri." Waxay yiraahdaan. Waxaa jira qabow xoog leh bartamaha maalinta. Waxaan fiirinayaa Erciyes, waxay u muuqataa mid daal badan, si cad oo baraf ah.
Guddoomiyaha iyo Maareeyaha Guud ee Kayseri Erciyes. Waxaan la kulmay Murat Cahit Cıngı habeenkii in KAYSO ay martigelisay taageerayaasha Daansaani ah si ay u soo bandhigaan xarumaha Erciyes. Kuma socon karno buurta waqti ka waqti, waxaa nala ballanqaaday imaatinka soo socda. Shirkii Ansaarda ah ee Kayseri oo ka dhacay maalintii ka hor inta aanad magaalada galin adigoon dhegaysnayn. Waxaan ballan u geliyey Jinnie. Markii aan arkay maalgashiga Erciyes, waxaan ku qanacsanahay in Kayseri uu caan ku noqon doono xarunteeda isboortiga jiilaalka iyo sidoo kale magaca magaalada warshadaha.
Mustaqbalka Erciyes wuxuu wax ka bedelay Sharciga Degmada Hoose ee 2005. Buurta waxaa lagu qaaday xudduudaha degmada Kayseri ee caasimadda oo leh muraayad kaliya oo ah mitir xaddiga 26 million m2. Sababtan darteed, intii qorshaha masterka la sameeyey, buurta oo dhan ayaa si taxadar leh loo fakaray.
Inkasta oo gaarigeenu yahay nooca wadada laba-lane, heerka sare wuxuu gaaraa 2215. Jidku waa mashquul, sababtoo ah waxay ka gudbaysaa buurta waxayna sii socotaa Develi. 100 million euro oo ah wadarta guud ee Erciyes Ski Center 300 maalgelin lacageed oo euro ah ayaa la qorsheeyay, ayaa sheegay in degmada. Cıngı The. 80 boqolkiiba ee kaabayaasha barafka ayaa hore loo dhammeeyey. Dhamaan 2 waxaa la rajeynayaa in ay dhammaadaan sanadka. Duulimaadka 33 waxaa laga helaa iridda gala 4, Hisarcık, Develi, Hacilar iyo Tekir Gate. Danta jimicsiyada jiilaalka ayaa sugaya marxalad kasta oo ka duwan albaabka. Maareeyaha Guud Murat Cahit Cıngı ayaa sheegay in ay la shaqeynayaan shirkada la-talinta ee Australiya ee ACT si loo dhiso qaabeynta iyo naqshadeynta xarunta. Erciyes waxay noqon kartaa xarun lagu ciyaaro 2009da. Furitaanka qalabka farsamada ee ugu horreeya waa 2011.
Dabcan, shaqadu ma dhamaato furitaanka warshad farsamo. Iyada oo dusha laga saaro buurta, dukaamada ayaa la burburiyay, goobaha bulshada iyo cunista iyo aagagga lagu cabbo ayaa la qorsheeyay barkadda. Nidaamyada biyaha iyo korontada ayaa la rakibay oo qashin-qubka ayaa lagu xiray nidaamka magaalada waxaana loo diraa daaweyn. Wax khasaare ah lagama haynin raaxada iyo nabadgelyada.
Buurtu waa inuu leeyahay sharciyadiisa
Dr. Murat Cıngı ayaa sheegay, imt Waxaan leenahay xarumo farsamo oo leh qulqulooyin tayo leh si ay u qanciyaan qoob ka ciyaarka skierka ah ee ku yaala meelaha caanka ah ee dunida ee caanka ah. " "Hadda, 3400 km ayaa si joogto ah looga boodi karaa mitirka 10. Khubarada ayaa sheegaya in xarunteena ay soo gali doonto 10 ugu horeysa aduunka oo leh sifooyin badan
Guryaha dabbaasha ee xagaaga waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan. Sidaa darteed, iibinta dhulka ee hoteelka 21 ee ka baxsan hoteelada hadda jira ayaa la sameeyey. 2 waxay yeelan doontaa SOMXXXXXXXXXXXXA wadarta guud ee 17, oo ay ku jiraan 28 boutique. Horumarinta gobolka ayaa la sameyn doonaa marka dhismaha la dhammeeyo.
Meelaha barafka lagu ciyaaro, 20 kilomitir ayaa la gaari karaa iyada oo la isticmaalayo wiishyada kuraasta, qalabka farsamada iyo meelo yaryar.
Ma jirto duulimaad toos ah oo caalami ah oo loo diro Kayseri, laakiin xaruntu waxay aad ugu dhow tahay maddaarka Kayseri. Waxaa intaa dheer, waxaa suurtogal ah in la soo jiito dareenka 3 ee dalxiisayaasha ku imanaya Cappadocia oo ah goobaha barafka lagu ciyaaro. Kordhinta joogista dalxiisayaasha aagga ku yaala maalinta 2,8 leh xirmo fasax oo soo jiidasho leh. Bartilmaameedyada Murat Cıngı. Qodob kale oo ka dhigaya jadwalka soo jiidashada waa qiimaha yar ee gelitaanka.
Erciyes, hoolalka shirarka ee ku habboon dalxiiska, macalinka guud ee Cyngin ciyaartoyda doping ee dabiiciga ah iyo kooxaha kubadda cagta ayaa doorbidaya hawada. Haddii Erciyes ay suubiyaan suugaanta isboortiga sida meel lagu dabaasho, sida ay u dooneyso, waxay keeni doontaa isbedello badan oo magaalada ah. Isbitaal oo ku takhasusay shilalka skiing, xarumaha sahayda iyo khayraadka aadanaha ee khibradda leh ayaa loo baahan doonaa.
Cilmi-baaris ayaa muujisay in dadka reer Kayseri ay ku faanaan magaalooyinkooda oo ay aad u jecel yihiin asxaabtooda. Hoyga raaxada ee raaxada ah waxaa loola jeedaa shisheeye badan, taas oo taabanaya labadaba dheelitirnaanta dhijitaalka ah iyo dharka bulshada. Isbedelka buurta wuxuu si toos ah u saameynayaa Kayseri oo leh fursado iyo halis. Si wadajir ah ula shaqeeya xerada Erciyes, Kayseri wuxuu u baahan yahay inuu mustaqbalka u diyaariyo fursado iyo halis.
Ku dhawaaqida qandaraaska: Dhismaha wadada daadguraynta iyo qaban qaabada aaladda…
Ka taxadar sidan markaad raacaysid metrobus
Xildhibaanku wuxuu baari jiray shaqada YHT iyo buundada xarun
Salih Koca: Khadka tareenka SSK waa inuusan joojin wax badan
Guddoomiyaha Gobolka Koca, Baarista Qadka Tareenka
Nin, Tülomsaşa wuxuu ku dhawaaqay in shaqaaluhu noqon doono
Xildhibaan Baaritaan ku sameeyay New Peron (Sawir Sawir)
Guddoomiyaha Koca, Khadka Tareenka Xawaaraha Sare ee Karaman-Konya ayaa la baaray
Tareen weyn ayaa istaagay, waxaan siiyay salaan
Dadku ma arkin tareenka (Video)
Mashruuca Gudbinta Balikesir Koca Seyit
Xubin Baarlamaanka Koca Glorious Northern Ring Road
Kayseri Erciyes AS
Erciyes Ku Faraxsanaanta Caruurta iyo Carruurta Ku Jira Guryo Rajada
Xidhan oo ku taal bridge-ka Izubububurun